National Rosé Day: Celebrate with Chicago Rosé | Breaking Travel News
Ikhaya » izithuba » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Usuku lweSizwe lweRosé: Bhiyozela kunye neChicago Rosé
Iindaba zeNdibano zeAndorra • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zokuhamba ngeshishini • Iindaba zokuHamba • Iindaba zewayini
Usuku lweSizwe lweRosé: Bhiyozela kunye neChicago Rosé
I-Latitude Beverage, inkampani evelisa iimveliso zewayini zesizwe ezinje nge-90 + Cellars kunye neLila Wines, izisa iqela eChicago kweli hlobo kunye neCelebrate Chicago Rosé, iwayini elilinganiselweyo lewayini ukusela lonke ixesha lonyaka.
Bhiyozela uChicago Rosé wadalwa kunye nehlobo laseChicago elithandekayo engqondweni, ukuqala kwileyibhile ebetha ngokuzingca ebonisa imibala yesixeko kunye nembonakalo yezulu. Le wayini ngumxube wasemazantsi wase French we Grenache, Syrah, Cinsault kunye ne Mourvedre base Languedoc, France. I-crisp, iyahlaziya, yomile kwaye ineziqhamo ngamavumba amaqunube amatsha kunye neetsheri ezibomvu. Yidibanise ne-pizza enzulu yesitya, ii-hotdogs zesitayile saseChicago kunye neentsuku ezingamavila ezihamba ngaselunxwemeni.
"IChicago inendawo ekhethekileyo ezintliziyweni zethu," utshilo uKevin Mehra, i-CEO, iLatitude Beverage. “Samkelwe ngezandla ezishushu kumbindi-ntshona xa sandisa ishishini lethu ngaphaya kweNew England phantse kwiminyaka elishumi eyadlulayo, sisenza iChicago enye yeemarike zethu zokuqala. Njenge-Rosé yethu yonyaka kuLwandle lwaseMichigan, le wayini ibhiyozela ihlobo eChicago xa isixeko sidubule ngokwenene. ”
Ayizukunandipha kuphela iChicago Rosé ngabantu baseChicago, iya kwenza okuhle nakuluntu lwasekhaya. Idola enye kwibhotile nganye ethengisiweyo iya kuya kwi-Greater Chicago Food Depository, ilungu le-Feeding America elihambisa ukutya okulingana ne-159,000 yokutya kwi-Cook County yonke imihla. Ukuthengiswa kwereosé ngeli xesha kuqikelelwa ukuba kuya kuvelisa phantse i-10,000 yeedola kwindawo yokugcina ukutya.
"Sinombulelo kumaqabane anje nge-90 + Cellars ezisincedayo ukwenza iChicago ibengcono," utshilo uKate Maehr, umphathi omkhulu weGreater Chicago Food Depository kunye neCEO. "Le nkxaso iguqulela ekubeni kukutya okusempilweni kunye noluntu olonwabileyo kumntu wonke."
Fumana iSikhumbuzo seChicago Rosé kwiivenkile zikaMariano, kunye nabanye abathengisi bewayini kwindawo yaseChicago. Iwayini ine-SRP ye- $ 14.99 kwaye ilapha kanye ngexesha loMhla weSizwe weRosé ngoMgqibelo, nge-8 kaJuni.